Ikozvino inowanikwa Gnome 3.24, idzi ndidzo nhau huru | Linux Vakapindwa muropa
Ikozvino inowanikwa Gnome 3.24, idzi ndiyo nhau huru
Iyo yazvino vhezheni yekare Gnu / Linux desktop yakaburitswa maawa mashoma apfuura, gnome 3.24. Iyo vhezheni inounza kumwe kugadzirisa uye mhinduro kumatambudziko aive nevashandisi veGnome.
Uyewo Tsigiro yeWayland yakagadziridzwa uye matambudziko nemapurogiramu ayo makuru akagadziriswa. Heano makuru nhau kuti iyi vhezheni yeGnome inounza nayo kune yekupedzisira mushandisi.
1 Night screen
2 Mifananidzo yeGnome
3 Maawa Applet
5 Gnome Mitambo
6 Software Center
Iyo nyowani vhezheni yeGnome inouya nayo firita inoshanda yebhuruu mwenje izvo zvinotibvumidza kuti tishande zvirinani mumaawa tisina masikati machena. Izvi zvichaonekwa mune yepamusoro pani yeGnome Shell kuti ikwanise kuishandisa uye kuidzora neyakareruka yakazara uye kuigadzirisa kune yedu nharaunda.
Iyo Gnome Mifananidzo application yakavandudza kutarisa kwayo pamwe nemetadata yemifananidzo, ichikwanisa kugadzirisa kwayiri uye kuwedzera mukati iro GPS basa iro Gnome 3.24 yavaka-mukati.
Iyo nguva applet yachinja zvakare, ichipa rumwe ruzivo. Iye zvino unenge uine ruzivo rwemamiriro ekunze, ruzivo rwekugadzwa uye kuwana kwakananga kukerenda uyezve, kunanga kuwana kune zviziviso.
Nyeredzi faira maneja, Nautilus, akachinjawo asi kazhinji tarisa pakururamisa bugs uye matambudziko ekuita iyo yaive nemaneja maneja. Izvo zvinoenda kune iyo Wayland rutsigiro.
Gnome Mitambo igadziriro yezvishandiso zvinopa mushandisi mitambo yeakararama yehupenyu hwese. Mune ino kesi, iyo yemavhidhiyo mitambo yakagadziridzwa uye zvakare iyo retro mutambo koni emulators inopihwa nechikamu chino cheGnome kukwanisa kutamba mitambo yechinyakare.
Iyo Gnome Software Center yakagadzirisawo mabhugi ayo asi pamusoro pazvo zvese yakatarisa pairi zvirinani kuisa rutsigiro rwemapakeji epaketi yezvikamu zvinogona kuishandisa.
Iyo inobudirira uye inoshanda Gnome ndizvo izvo vagadziri veGnome vanga vachitsvaga uye zvinoita sekunge neGnome 3.24 yakawanikwa. Zvisinei, kuchine mashoma ekugovera anosanganisira iyi desktop desktop mune avo epamutemo marekodhi. Zvinotaridza kuti vashandisi veGnome vanofanirwa kumirira kwenguva yakati rebei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Ikozvino inowanikwa Gnome 3.24, idzi ndiyo nhau huru
Diego Soler akadaro
Kune madhesiki akati wandei akura kupfuura Gnome, yakafanana KDE pasina kuenderera kumberi….
Pindura Diego Soler
Iwe ungaisa sei iyi vhezheni yegnome muUbuntu? Ini handifarire kubatana kunouya nekutadza
Shandisa ubuntu gnome kana Fedora linux
Zvakavanzika zvevakare, iyo nyowani Hondo yeWesnoth mushandirapamwe
Wepamusoro 25 Yemitambo Yemavhidhiyo yeGNU / LINUX uye Steam Machine